စွမ်းအင်ထိရောက်စွာသုံးစွဲမှု အထောက်အကူပြုများနှင့် အလေ့အကျင့်များ – MFPEA
စွမ်းအင်ထိရောက်စွာသုံးစွဲမှု အထောက်အကူပြုများနှင့် အလေ့အကျင့်များ
Homeစွမ်းအင်ထိရောက်စွာသုံးစွဲမှု အထောက်အကူပြုများနှင့် အလေ့အကျင့်များ
စွမ်းအင်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း(Energy Audit) အခြေခံသဘောတရားများနှင့် အမျိုးအစားများ
စွမ်းအင်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတစ်ယူနစ်အတွက် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန် နည်းလမ်းများကို သတ်မႇတ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်စစ်ဆေးခြင်းဆိုသည်မှာ စွမ်းအင် စစ်ဆေးမှု သတ်မှတ်သည့်ကဏ္ဍအတွင်း စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုတို့ကို စနစ်တကျ ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာခြင်း၊ စွမ်းအင်စွမ်းဆောင်ရည် (Energy performance) တိုးတက်လာစေရန် အခွင့်အလမ်းများဖော်ထုတ်ခြင်း၊ တွက်ချက်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရန် စနစ်တကျ အကဲဖြတ်လေ့လာမှုတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ စွမ်းအင်စစ်ဆေးခြင်းသည် အဖွဲ့အစည်း အတွင်း စွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲရန် အခြေခံ စံနှုန်း (သို့မဟုတ် ရည်ညွန်းကိုးကားချက်တစ်ခု) တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးတွင် စွမ်းအင်ကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အသုံးပြုရန် အခြေခံကျကျ စီမံချက်ရေးဆွဲနိုင်ရန် ဖြည့်စီးပေးသည်။
စွမ်းအင်စစ်ဆေးခြင်း၏ ပထမခြေလှမ်းမှာ စွမ်းအင်ထိရောက်မှု တိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ် သော တိုးတက်ရာနည်းများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် စွမ်းအင်မည်မျှ အသုံးပြုသည်ကို အကဲဖြတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်စနစ်ရှိ လွဲချော်မှုများကို တစ်ကြိမ်ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ၄င်းတို့ကို မှန်ကန်အောင် ပြင်ဆင်နိုင်မည်။ စွမ်းအင်စစ်ဆေးခြင်းတွင် တွေ့ရှိရသော ကိစ္စရပ်များကို မှန်ကန်အောင် ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ချွေတာ၍ စွမ်းအင်ကျသင့်ငွေနည်းပါးစေပြီး ၊ စွမ်းဆောင်မှု တိုးတက် စေမည်။
စွမ်းအင်စစ်ဆေးခြင်းကို အောက်ပါအမျိုးအစား နှစ်မျိုးဖြင့် ခွဲခြားနိုင်သည်။
၁။ လုပ်ငန်းများ လှည့်ပတ်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ပဏာမ စစ်ဆေးခြင်း – ၄င်းသည် စက်ရုံအား လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကို အကျွမ်းတဝင်ရှိရန်နှင့် ထင်ရှား သည့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေသော သို့မဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝမှုမရှိသော နယ်ပယ်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဤစွမ်းအင်စစ်ဆေးခြင်းအမျိုးအစားသည် အဓိက ပြဿနာ နယ်ပယ်များကိုသာ လွှမ်းခြုံနိုင်မည်။ မှန်ကန်သော အစီအမံများကို အကျဥ်းချုပ် ဖော်ပြခြင်း ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကို အမြန် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပေးခြင်း ၊ လုပ်ငန်းလည် ပတ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များကို ချွေတာနိုင်မည့် အလားအလာများနှင့် ရိုရှင်းသော အကျိုးအမြတ် ပြန် လည်ရရှိမည့် အချိန်ကာလ တွက်ချက်ပေးခြင်းများပါဝင်သည်။
အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း – ပြီးပြည့်စုံသော စစ်ဆေးမှုတစ်ခုသည် အဓိကကျသော စွမ်းအင် သုံးစွဲမှု စနစ်များအားလုံးကို အကဲဖြတ်ခြင်းကြောင့် စက်ရုံတစ်ခုအတွက် စွမ်းအင် စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှု အသေးစိတ်အစီအစဥ်တစ်ခုကို ဖြည့်စီးပေးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် စစ်ဆေးသည့် လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် စက်ရုံများတွင် များသောအားဖြင့် မရှိသော အထူးကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းစဥ် သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းပမာဏများကို တိုင်းတာမှုများပါဝင်သည် (လာမည့် အပိုင်းတွင် အတိုချုပ် ဖော်ပြထားသည်)။ ဤစစ်ဆေးမှုအမျိုးအစားသည် စွမ်းအင်ခြိုးခြံချွေတာမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်တို့ကို အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပေးနိုင်သည်။ အဆိုပြုထားသော ထိရောက်မှု တိုင်းတာမှုများအားလုံး ၏ အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုများ ၊ အဓိက ပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံး၏ စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု အတွက် တွက်ချက်မှုများနှင့် စွမ်းအင်ခြိုးခြံချွေတာမှုအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ်များ တွက်ချက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသော စစ်ဆေးမှုတစ်ခုတွင် အဓိကကျသောအရာတစ်ခုမှာ (Energy Balance) စွမ်းအင် ညီမျှခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် စွမ်းအင်အသုံးပြုသောစနစ်များ စာရင်း ၊ လက်ရှိ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အခြေအနေများ၏ ယူဆချက်များနှင့် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု တွက်ချက်မှုများပေါ်တွင် အခြေခံသည်။
အခိုးထုတ် ဓာတ်ငွေ့ တိုင်းတာ ကိရိယာ (Flue Gas Analyzers)
ဘွိုင်လာများ ၊ မီးဖိုချောင်သုံး
ဓာတ်ငွေ့များရှိ အောက်စီဂျင်နှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ကို တိုင်းတာ/စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်
အနီအောက်ရောင်ခြည် အပူချိန်တိုင်းကိရိယာ (Infrared Thermometers)
အနီ‌ရောင်အောက်ရောင်ခြည် နည်းပညာဖြင့် အကွာအဝေးတစ်ခုမှ အပူချိန်တိုင်းတာရာတွင်
– စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို အကဲဖြတ်ရာတွင် အသုံးဝင်သည်။
နှုန်းလွန်အသံလှိုင်း မီတာ (Ultrasonic flow meter)
ပိုက်လိုင်များပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော နှုန်းလွန်အသံလှိုင်း အာရုံခံကိရိယာများမှတဆင့် အမျိုးမျိုးသောပိုက်များမှ တဆင့် အရည်စီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုသည်။
ပါဝါ တိုင်းတာ ကိရိယာ (Power analyzer)
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုင်းတာခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် အသုံးပြုသည် – လျှပ်စစ်စနစ် အမျိုးမျိုး / ပစ္စည်းကိရိယာများ (ဥပမာ – မော်တာ) လုပ်ဆောင်မှု အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ညှပ်လို့ရသော အမ်မီတာ (Clamp on amp. Meter)
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စီးဆင်းမှုကို အနှောက်အယှက်မရှိဘဲ အကဲဖြတ်တိုင်းတာရာတွင် မြန်ဆန်ပြီး ချက်ခြင်းတိုင်းတာနိုင် – ပါဝါ တိုင်းတာကိရိယာ (power analyzer) ကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် ချက်ခြင်း တိုင်းတာနိုင်သည်။
အလင်းရောင်တိုင်းကိရိယာ (Lux meter)
အလင်းရောင်ဖြာထွက်မႈကို တိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုပြီး – အသုံးပြုသင့်သည့်အလင်းရောင်ပမာဏကို ချိန်ဆရာတွင် အသုံးဝင်သည်။
စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှင့် ဆုံးရှုံးမှုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်အရေအတွက်ပမာဏ တိုင်းတာတွက်ချက်မှုများကို အောက်ဖော်ပြပါစစ်ဆေးသည့် ပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့် ဆောင်ရွက်သည်။
စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (ISO 50001)
စွမ်းအင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်နင့် စွမ်းအင်ခြိုးခြံချွေတာမှုကို စဥ်ဆက်မပြတ် တိုးတက် စေရန် ၊ တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးခြင်းသာမက ၊ စွမ်းအင်လျှော့ချရေး အခွင့်အလမ်းများကို ဖော်ထုတ်ရန် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု (EnMS) သည် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု စီမံခန့်ခွဲမှုများကို နေ့စဥ်စီးပွားရေးစနစ်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရည်မှန်းချက်မှာ လုပ်ငန်းများတွင် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ် ကုန်ကျစရိတ် ချွေတာနိုင်ရန်နှင့် စဥ်ဆက်မပြတ် စွမ်းအင်ထိရောက်စွာသုံးစွဲမှုကို တိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤစနစ်ကျသော ချဥ်းကပ်မှုသည် အဖွဲ့အစည်းများအား သင့်လျော်သောစနစ်များနှင့် လုပ်ငန်းစဥ်များ ထူထောင်ရန် ကူညီနိုင်မည်။ ISO 50001 သည် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (ISO) မှ ဖော်ဆောင်ထားသော စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု အတွက် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အား ထူထောင်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်‌ဆောင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းအတွက် စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်ပေးပြီး၊ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား စွမ်းအင်ခြိုးခြံချွေတာမှု တိုးတက်ကောင်းမွန်မှု ရှိစေရန်နှင့် စွမ်းအင်ခြိုးခြံချွေတာမှု၊ စွမ်းအင်လုံခြုံရေး၊ စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု နှင့် သုံးစွဲမှုတို့ကို စနစ်တကျ ချဥ်းကပ်မှုဖြင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။
ISO 50001 သည် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် လိုက်နာရမည့် သတ်မှတ်ချက်များ မူဘောင်တစ်ခုဖြစ် သည်
စွမ်းအင်ကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အသုံးပြုရန်အတွက် မူဝါဒချမှတ်ခြင်း။
မူဝါဒနှင့် ကိုက်ညီရန် ရည်မှန်းချက်များနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း။
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များကို ပိုမိုနားလည်သိရှိရန်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်နိုင်ရန် အချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်း။
ရလဒ်များကို တိုင်းတာခြင်းနှင့် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစဥ်မပြတ် တိုးတက်‌အောင် လုပ်ဆောင် ခြင်း။
အရင်းအမြစ် – ISO50001:2011 ၊ အများကလက်ခံထားသော Plan-Do-Check-Act နည်းဖြင့် စဥ်ဆက်မပြတ်လုပ်ငန်းစဥ်တိုးတက်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
ISO 50001 အသိအမှတ်ပြု စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ခု ထူထောင်ခြင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အပေါ်တွင် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ယုံကြည်မှု မြှင့်တင်ရန် အထောက်အကူပြုမည်။
အသုံးဝင်သော စွမ်းအင်ခြိုးခြံချွေတာမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အချို့မှာ-
လေ၊ ရေ‌နွေးငွေ့နှင့် လောင်စာဆီယိုစိမ့်မှုအားလုံးကို လုံအောင်ပိတ်ပါ။ ဖိအားပေးထားသော လေသည် စျေးနှုန်းကြီးသော စွမ်းအင်တစ်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက် – မဖြုန်းပါနဲ့! တစ်စက္ကန့် လျှင် လောင်စာဆီတစ်စက်ယိုစိမ့်ခြင်းသည် တစ်နှစ်လျှင် လီတာ ၂,၀၀၀ ကျော် ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
မီးဖို အခိုးဓာတ်ငွေ့များမှ စွန့်ပစ်အပူကို ပြန်လည်ရယူပြီး လေထုလောင်ကျွမ်းခြင်းအတွက် အပူပေးရာမှာ ပြန်လည်အသုံးပြုပါ။ ၂၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် လောင်ကျွမ်းသော လေထုအပူချိန် မြင့်တက်တိုင်း လောင်စာဆီ ချွေတာမှု ၁% ရရှိစေမည်။
မီးဖို၌ ပိုလျှံလေကို ထိန်းချုပ်ပါ။ လေပမာဏ ၁၀% ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခြင်းသည် မီးဖိုများတွင် လောင်စာဆီကုန်ကျမှု ၁% ချွေတာမှု ရရှိစေမည်။ နှစ်စဥ် မီးဖို လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု ၃၀၀၀ ကီလိုလီတာ အထိရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စုစုပေါင်း ကျပ်ငွေ ၁၆.၅ သန်း (လောင်စာဆီတစ်လီတာတန်ဖိုး- ၅၅၀ ကျပ်ဖြင့်ခန့်မႇန်းလျှင်) ချွေတာနိုင်မည်။
မီးဖိုပေါက်များမှတဆင့် အပူဆုံးရှုံးမှုများကို လျှော့ချပါ။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ အပူချိန် ၁၀၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် လည်ပတ်သော မီးဖိုသည် တံခါးပွင့်လျက်ရှိနေပါက (၁၅၀၀ မီလီမီတာ x ၇၅၀ မီလီမီတာ) လောင်စာဆုံးရှုံးမှုမှာ တစ်နာရီလျှင် ၁၀ လီတာ ရှိသည်။ တစ်နှစ်လျှင် နာရီပေါင်း ၄,၀၀၀ ကြာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်လျက်ရိႇသော မီးဖိုတွင် ၄င်း၏ ခန့်မှန်းခြေဆုံးရှုံးမှုမှာ ကျပ် ၂၁ သန်းခန့်ဖြစ်သည်။
ဘွိုင်လာလည်ပတ်မှုတွင် ရေ‌နွေးငွေ့ ငွေ့ရည်မှ အပူချိန် ပြန်လည်ရယူသုံးစွဲပါ။ ထိုသို့ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည် ဘွိုင်လာအတွက် အသုံးပြုသော ရေအပူချိန် ၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် နှုန်းမြင့်တက်မှုတိုင်းတွင် လောင်စာ ၁% ချွေတာနိုင်မည်။
ဘွိုင်လာစွမ်းရည် တိုးတက်စေရန်အတွက် ဘွိုင်လာမှထွက်သော မီးခိုးတွင်ဆုံးရှုံးမှု၊ အပူဖြာထွက်မှုတွင်ဆုံးရှုံးမှု၊လောင်ကျွမ်းမှုမပြီးမြောက်ခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးမှု၊ လောင်ကျွမ်းမှု အကြွင်းအကျန်များမှုတ်ထုတ်ချိန်တွင်ဆုံးရှုံးမှု၊ ပိုလျှံသော လေများကြောင့် လောင်စာဆီ ဆုံးရှုံးမှု၊ အစရှိသည်တို့ကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ရမည်။ သင့်လျော်သော ထိန်းချုပ်မှုသည် လောင်စာသုံးစွဲမှုကို ၂၀% အထိ လျှော့ချပေးနိုင်မည်။
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သိုလှောင်ပေးသော (capacitor) ကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် စွမ်းအင် အချိုးပမာဏ (power factor) ကို တိုးတက်စေပြီး ၊ ကီလိုဗို့ (KVA) သုံးစွဲအားကို လျှော့ချပြီး ၊ စက်ရုံအတွင်း ဓာတ်အားဆုံးရှုံးမှုများကိုလည်း လျှော့ချနိုင်မည်။
စွမ်းအင်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရန် အခွင့်အလမ်းများကို ဖော်ထုတ်ပြီး အခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန် တိုင်းတာ ဆောင်ရွက်မှုများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။ စွမ်းအင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို စဥ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်စေရန် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် စဥ်းစားပါ။
ဤ webpageကို ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ဖြင့် ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပြီး ထိန်းသိမ်းခြင်းများကို MFPEA မှလုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများသည် MFPEA တစ်ဦးတည်း၏ ကိစ္စရပ်သာဖြစ်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ရှုမြင်လက်ခံမှုကိုထင်ဟပ်သည်ဟု မယူဆနိုင်ပါ။
Total Website Visits: 87221